डा.केसीको सत्याग्रह कुनै व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउन वा कसैलाई रोक्नकै लागि थियो ?
आफू र आफ्नाले खान नपाउँदा मात्रै नीति र न्याय चाहिएको हो ?
आषाढ ०५, २०७७ २०:४६ मा प्रकाशित
डा.केसीको अनशनका कारण अनाहकमा कति निर्दाेश बिरामीकाे ज्यान गएकाे छ, कुनै लेखाजाेखा छ ? त्यसकाे जिम्मा कसले लिने हाे ? डा.केसीले ? डा.सिंहले वा डा.केसी अनशन बस्दा उहाँको समर्थनमा उलर्ने भीडले ?
काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र अध्यययन संस्थान(आईओएम)को डीनमा दिव्या सिंह शाह नियुक्त हुनुभएको छ । प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बसी बसी गरेको सहमति र स्थापित गरेको बरिष्ठताको मान्यतालाई भने यस निर्णयले तिलाञ्जली दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सकसमेत रहनुभएकी शाह हाल आईओएमका कार्यरत चिकित्सकको बरियतामा ३५औं नम्बरमा हुनुहुन्छ । राजनीतिक शक्तिको आशीर्वादकै कारण यति धेरै वरिष्ठहरुलाई जिल पार्दै शाहलाई डीन नियुक्तीको तयारी गरे देखि नै आईओएमका थुप्रै चिकित्सकका असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेको थियो ।
डा.दिव्याले केसीको पक्षमा सहानुभूति बढाउन र आन्दोलन चर्काउन केसीको स्वास्थ्यबारे झुट विवरण समेत दिने गरेको आरोप त्यति बेला केसीको आन्दोलनमा सहभागी एक चिकित्सकले दाबी गर्नुभयाे ।
बुधबार शाहलाई डीनमा नियुक्त गरेपछि केही चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले विरोध जनाए पनि भागवण्डा मिलाएर त्यसलाई मत्थर पारिएको छ । रिक्त पदमा एक व्यक्तिको नियुक्ती हुनु कुनै ठूलो कुरा भएन । त्यो पदका लागि योग्यता पुगेरै शाहलाई त्यसमा नियुक्त गरिएको कुरामा पनि कुनै दुई मत भएन । तर हाल डीन बन्नुभएकी शाह नै कुनै बेला डा. केसीको आन्दोलनको मुख्य खम्बा हुनुहुन्थ्यो । केसीको आन्दोलनको पक्षमा माहौल बनाउने, विज्ञप्ति जारी गर्ने, अनशनरत डा. केसीको उपचारमा खटिने मुख्य पात्र डा. दिव्या नै हुनुहुन्थ्यो ।
डा.दिव्याले केसीको पक्षमा सहानुभूति बढाउन र आन्दोलन चर्काउन डा. दिव्याले केसीको स्वास्थ्यबारे झुट विवरण समेत दिने गरेको आरोप त्यति बेला केसीको आन्दोलनमा सहभागी एक चिकित्सकले दाबी गर्नुभयाे । ‘केसीको स्वास्थ्य नाजुक भन्दै वक्तव्यवाजी गर्नुहुन्थ्यो । तर अवस्था सामान्य हुन्थ्यो’ ती चिकित्सकले भन्नुभयो ।
यसरी केसीको आन्दोलन सफल पार्न भूमिका खेलेको मान्छेलाई नै मुख्य पात्र बनाई केसीको मान्यतालाई धज्जी उडाइएको छ । त्यो पनि कुनै बेला केसीकै आन्दोनका कारण डीन नियुक्त भएको ३ दिनमै बर्खास्तीमा पर्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले ।
सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरियो तर डा.केसी यसपटक चुप हुनुहुन्छ । बरिष्ठता मिचेर राजनीतिक नियुक्ती गर्दा धेरै पटक उहाँकै दबावमा हटाउँन बाध्य पारिएको छ ।
आईओएमबाट अवकाश भइसक्नुभएका भएका डा.केसी अहिले गुमनाम हुनुहुन्छ । सुदूर पश्चिमतिर रहनुभएका केसी यसबारे केही मुख खोल्नु भएको छैन् ।
निकै वर्षदेखि डा.केसीले कुनैपनि नियुक्ती गर्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नभएर वरिष्ठताका आधारमा गनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउनुभएको थियो । जहिले–जहिले आईओएममा नयाँ डीन नियुक्त हुन्थ्यो त्यति बेला डा. केसीको अनशन सुरु भइहाल्थ्यो । उहाँको अनशनको मुख्य माग नै बरिष्ठताका आधारमा नियुक्ती भन्ने हुन्थ्यो उहाँको आन्दोलनपछि पटक–पटक गरिएका सहमतिमा डीन लगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा पहिलो आधार बरिष्ठताको हवाला दिइयो र सोही अनुसार डीन,अस्पताल प्रमुखको नियुक्ती हुने पद्धती पनि बस्यो ।
तर अहिले फेरी डा.केसीको आन्दोलनको उपलब्धीलाई कुल्चदै बरिष्ठता मिचेर बरियतामा पछाडि रहनुभएकी सिंहलाई डीनमा नियुक्त गरियो तर डा.केसी यसपटक चुप हुनुहुन्छ । बरिष्ठता मिचेर राजनीतिक नियुक्ती गर्दा धेरै पटक उहाँकै दबावमा हटाउँन बाध्य पारिएको छ ।
नियुक्तीलगतै केसीको अनशनको दबावमा हटाइएकाहरु
२०६९ साल असारमा पहिलो पटक तीन दिन अनशन बस्दा केसीको मुख्य माग नै बरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नु पर्ने भन्ने थियो। सो समय डा. केसी कै माग अनुरुप वरिष्ठताका आधारमा डा। कुमुदकुमार काफ्ले आईओएमको डीनमा नियुक्त हुनु भएको थियो । काफ्लेले उमेर हदका कारण १ महिनामै अवकाश पाएपछि वरियतामा ३२ औं नम्बरमा रहनुभएका हालका त्रिवि उपकूलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गरियो ।
डीन नियुक्त भएको १३ औं दिनमा केसीकै अनशनका कारण डा. शशि शर्मा डीनबाट बर्खास्त हुनुभयो ।
यसैको विरोधमा केसीले २०६९ साउन २७ बाट दोस्रो अनशन सुरु गर्नुभयो। उहाँकै अनशनको बलमा तीन दिनमा नै बाँस्कोटा डीनबाट हटाइनुभयो। यसपछि केसीले अनशन तोड्नु भयो। बरिष्ठताकै आधारमा डा. प्रकाश सायमीलाई डीन बनाइयो ।
त्यसपछि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै २०७० पुसमा डा. सायमीले आईओएमको डीनबाट राजीनामा दिनुभयो । सायमीपछि डा.शशी शर्मालाई डीन नियुक्त गरियो । राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त गरेको भनेर डा. केसी पुनः पुस २७ गतेदेखि तेस्रो पटक अनशन बस्नुभयो । डीन नियुक्त भएको १३ औं दिनमा केसीकै अनशनका कारण डा. शशि शर्मा डीनबाट बर्खास्त हुनुभयो । डा. केसीका निकट साथी रहनुभएका शर्मा केसी अघिल्ला अनशनका सहयोगी र उहाँको उपचारमा खटिने डाक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो ।
कम्तिमा यसको जवाफ दिन सक्ने डा. केसी वा उहाँको तर्फबाट अहिले कोही तयार हुनुपर्ने हैन र ?
२०७० माघमा आईओएमको डीन नियुक्त हुनुभएका प्रा.डा शशि शर्मालाई केसीले अनशन बसेर दवाव दिएकै कारण १३ औं दिनका दिन बर्खास्त गरियो । त्यतिबेला केसीले बरिष्ठता मध्येबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने पहिलो माग थियो । डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा र डा.शशी शर्मालाई डीन बनाइदा बरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्ने माग राखी उनीहरुलाई हटाईयो । बरिष्ठताकै अडानले धर्मकान्त बाँस्कोटाले चौथो, कुमुदकुमार काफ्लेले १३ औं दिनमा राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो ।
त्यो बेलाको अनशनमा डा.सायमीलाई डीनमा पुन फर्काइनु पर्ने नभए बरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्नु पर्ने मुख्य माग केसीको थियो । डीनबाट बर्खास्त शर्माले त्यस लगतै आफ्नो पुनर्वहालीको माग राख्दै सर्वाच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । चार वर्षे कार्यकाल सकिन ४ दिन बाँकी हुँदा २०७४ पुष २३ गते गते शर्मालाई पुनर्वहाली गरेपछि केसी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि नै खनिदै अनशन बस्नुभएको थियो ।
अस्पतालका निर्देशकमा केपी सिंह नियुक्त हुँदा पनि बरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्छ भनी केसी र उहाँका समर्थकले आन्दोलन चर्काएर डेढ महिनामा नै राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो । जबकी उहाँको समय हदबन्दी अनुसार कार्यकाल जम्मा ३ महिनामात्रै थियो । डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनको मागलाई नै हेर्ने हो भने अहिले डीन नियुक्तिका लागि बरिष्ठता अनुसार सिंह भन्दा अगाडि ३४ जना प्राध्यापक हुनहुन्छ ।
डा.केसीको अनशनका बेला उहाँको समर्थकले धेरै पटक सरकारी अस्पताल बन्द गरिएको थियो । त्यतिबेला उपचार नपाएर निजी अस्पतालमा पहुँच नभएका धेरै बिरामीले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेको डा.केसीको आन्दोलनको उपलब्धीलाई धज्जी उडाउँदा उहाँ र उहाँलाई आदर्श मानेर पछि लाग्नुभएका अनुयायीहरु कहाँ हुनुहुन्छ ?
डा.केसीको अनशनका कारण अनाहकमा कति निर्दाेश बिरामीकाे ज्यान गएकाे छ, कुनै लेखाजाेखा छ ?
नत्र यसअघि डा.केसीको सत्याग्रह र उहाँको समर्थनमा गरिने आन्दोलन कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा पुर्‍याउन वा कसैलाई पदमा पुग्नबाट रोक्नकै लागि मात्रै थियो ? कम्तिमा यसको जवाफ दिन सक्ने डा. केसी वा उहाँको तर्फबाट अहिले कोही तयार हुनुपर्ने हैन र ? डा.केसी अनशन बस्दा उहाँको समर्थनमा उलर्ने भीडले आफूले आफ्नाले खान नपाउँदा मात्रै नीति र न्यायका कुरा गर्ने हो ?